WARAR – Page 110 – Banaadir Times
Musalsalka Dhaqtarkii Mucjisada Xalqadii 1aad
Musalsalka Maria&Mustafa Qeybtii.2aad
Xuska iyo Baroordiiqda Laashin Axmed caalin Caddaan
Home Archive by category WARAR (Page 110)
By banaadir 24th July 2018 No comment
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugida qaranka ayaa gelinkii dambe ee maanta rag bastoolado ku hubeysan ku toogteen bartamaha suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho. Sarkaalkan ayaa la sheegay inuu hore u soo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada Waaberi waxaana lagu diley goob laga raaco gaadiidka dadweynaha. Raggii ka dambeeyay dilka sarkaalka ayaa la
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ugu baaqay Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iney ka feejignaadaan qataraha kaga imaan kara maalgelinta Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada Mucaaradka ah ee ku shirsan magaalada Nairobi. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in waxa ka socda magaalada Nairobi ay yihiin abaabul
By banaadir 3rd June 2018 No comment
Dowladda itoobiya ayaa qorsheyneysa dhismaha Ciidamadeeda Badda ah, kaddib markii ay dhameystirtay Ciidamadeeda cirka iyo dhulka. Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay Madaxda Ciidamada Difaaca Qaranka “Kaddib dadaaladii la sameeyay oo aan ku dhisnay awoodda difaaca qarankeeda, waxaa dhisnay mid ka mid ah ciidanka ugu xooggan
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koonfur Galbeed, halkaasoo uu uga qeyb galayo shirka Amniga Qaranka. Shirkan ayaa noqonaya kii labaad oo uu ka qeyb galo, tan iyo markii xilka loo magacaabay, waxaana bishii February aheyd markii u horeysay oo […]
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Sanadkii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya hadafka ugu weyn ee horyaallay uu yahay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay Kheyre in marwalba ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan xaquuqda Ciidamada si ay ugu guuleystaan sugida Amniga dalka dalka Guud ahaan. […]